“ဖြေ လျော့ ဟန်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ဖြေ လျော့ ဟန်”	13
“ဖြေ လျော့ ဟန်”
Posted by ခင်ခ on May 4, 2015 in Creative Writing, Poetry | 13 comments
naywoon ni says: သိပ်​လည်း အားမ​လျော့ပါနဲ့ဗျာ ။ ဒီလိုပဲ တွယ်​ကပ်​ပြီးရှင်​သန်​ကြတာ​ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: ပိုလို့ ပိုလို့ ပူလာလွန်းတော့လဲ ခံနိုင်ရေတွေ လျော့ချင်ချင်မို့ပါဗျာ
uncle gyi says: နောင်လာမယ့်နှစ်တွေပိုပူအုန်းမှာကိုခရဲ့
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အညာမှာ ဒီနှစ်
အတော့်ကို ပူဒလယ် …
အိမ်ထဲမှာတောင် နေနိုင်ဘူးရယ် …
Alinsett @ Maung Thura says: ရန်ကုန်က အပူဒဏ်ဟာလည်း သတိမပြုမိပဲ မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ
ကတ္တရာလမ်းတောင် နင်းလိုက်ရင် အိ ဆင်းသွားတဲ့အထိ. . .အပူကြောင့် ပျော်ပြဲနေပြီ
အခုတလော ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အပေါ်တည့်တည့်မှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ အဆီးအတားမဲ့ ဝင်လာနိုင်ဖို့များ
.ကြည့်ပေးကြပါဦး. . .
.လေးခ. . .မတွေ့တာတောင် ကြာပေါ့။
ကဗျာလေး ပြန် တွေ့ရလို့ ဝမ်းသာ ကျေနပ်မိပါ့ဗျားးး
manawphyulay says: ရှင်သန်ခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်သည် အားတက်ဖွယ်ပင်တကား
kai says: ကမ္ဘာပူသွားတာတော့ အသေအချာပါပဲ..
အာတိတ်ရေခဲတုံးတွေပျော်ကျလာသမို့… နောင်အနှစ်၁၀၀ထဲ.. ပင်လယ်ရေပြင်.. ၅-၆ပေလောက်မြင့်လာမယ်တွက်ထားကြသတဲ့…။
အဲဒါဆို.. ဧရာဝတီတိုင်းပျောက်လောက်သည်.. ထင်မိ…။
နောင်အနှစ်၁ထောင်မှာ.. ကမ္ဘာကိုလူတွေဖျက်လိုက်မယ်လို့… စတီဗင်ဟော့ကင်းကတော့ ပြောလိုက်ပြီ..။
ယူအက်စ်အပါအ၀င်.. ဥရောပနိုင်ငံတွေကလည်း..ောနက်ကမ္ဘာတခုအသည်းအသန်ရှာနေကြပြီ…
လူ့ယဉ်ကျေးမှု.. ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ… အချိန်သိပ်ကျန်လှရယ်တော့မဟုတ်… =
padonmar says: ရှေ့စာလုံးတွေ ပျောက်ကုန်လို့ အဓိပ္ပါယ်မှန် ဖတ်မရမှာ စိုးတာနဲ့ ဦးပါရဲ့ ရှေ့ဆုံးစာလုံးရှေ့ အစက်ချတဲ့ နည်းနဲ့ ပြင်ပေးကြည့်ထားပါတယ်။
ခင်ခ says: ကျေးဇူးပါ မပဒုမ္မာရေ။ အဲလိုပျောက်သတဲ့လား သတိထားစရာပေါ့ဗျာ။
မြစပဲရိုး says: ကိုခ ရေ
အပူ နဲ့ တွေ့မှ ရွာ ထဲ ပြန်လာတော့တာလား။
. ရေချမ်းချမ်းလေး ကမ်း လိုက်ပါတယ်။ သောက်ပြီး အမောဖြေပါလေ။
lu lu says: ရွာထဲက နေအေး လို့ ထင်ရဲ့ 
Mike says: .ကိုခ ကဗျာလေးနဲ့ ရွာဝင်အေးရိပ်ခိုသကိုးဗျ….ရန်ကုန်လည်းပူသဗျို့
Ma Ma says: လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀ကျော်လောက်က စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းမှာ (၀င်းဦးရေးတာထင်တယ်) ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်က အလွန်ဇီဇာကြောင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း ရေးထားတာ။
*ကမ္ဘာကြီးမှာ အိုဇုန်းလွှာပေါက်လို့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မထိအောင် နေရမယ့်အကြောင်း၊ *အာတစ်ဖစ်ရှယ်တွေများလာလို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသောက်တဲ့အကြောင်း၊
*အစစ်အမှန်ရဖို့ ကိုယ်တိုင်နွားမွေးပြီး နွားနို့သောက်တဲ့အကြောင်း။
အဲဒီတုန်းကဖတ်ပြီး အတော်သည်းသည်းလှုပ်တာပဲ ရီစရာပဲလို့ ထင်ခဲ့မိတာ။
ခုတော့လည်း ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့အတွေးနဲ့ ရေးထားတာပါလားလို့ သဘောကျချီးကျူးမိတော့တယ်။